कमला नदी बाढीपिडितले सरकार खाेज्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा गरियाे नारावाजी
मिथिला रत्न,सिरहा : सिरहा र धनुषा बिचबाट बग्ने कमला नदीका बाढीबाट घरवार विहिन पिडित परिवार कास ,बाँस र कपास खाेजदै जिल्ला प्रशासन कार्यलय सिरहामा रहातदे र सर्पबाट बच्चन लाईटका व्यवस्था अभिलम्ब गर नारा लगाउँदै नेपाल सरकार खाेजदै सदरमुकाम सिरहा पुगेका छन् ।
२६ गते देखि घरमा पानी छन् । सर्पकाे टाेकाईबाट एक जना घयाल छ । घरमा कुनै अन्न छैन । सफा खानेपानी , वर्षबाट बच्चने त्रिरपाल छैन् । निकमा स्थानिय सरकारकाे हाल सम्म काेही पुगेकाे छैन् । फाेन गर्दा मेयर र उपमेयरका फाेन उठदैन् । हामी पिडित बाढीसँग लडेर भाेख भाेकै कमला नदीमा फसेका छाैँ ।
नेपाल सरकारकाे अाज माथिबाट हेलिक्पट्रर गएकाे देखे तर हामीलाई चाहिने राहत र राति बस्ने सामनकाे व्यवस्था कसैले गरेका छैन् पिडित रामनारायण माेचिले बताउनु भयाे । हामी ३०० जना दलित परिवार घरवार विहिन अवस्थामा छाैँ ।वडा अध्यक्षले हिजाे २ वटा माेमवती र चुरा दिनु भएकाे थियाे । अब हामीसँग राहतका लागि पैसा छैन् । तिमिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यलय जाउ भन्छ । अाज जिल्ला प्रशासन कार्यलय अाएका छाैँ ।
जिल्ला अधिकारीसँग भेट भईरहेकाे छैन् । यहाँका अधिकार‌हरूले भन्छ हामी केही गर्न सक्दैन् । तिमिहरू अाफनाे स्थानिय सरकारमा जाउ । हाम्राे कुरा कसैले सुनिहेका छैन् । स- साना छाेरा छाेरी छाेडेर नदी तरेर याहाँ पुगियाैँ । तर हाम्राे नेपाल सरकार भेटेन् । स्थानिय सरकारमा बिपतका नाममा कराेडैँ बिल मिलान हुन्छ । तर हामी कास ,बाँस र कपासका लागि सरकार खाजदैछाैँ । नेताहरूले विपत टरेपछि रहात लिएर अाउँछ ।
धेरै अाफै खान्छ , थाेरै अाफना चिनजानलाई दिन्छ र केही बचेका हामी दलित परिवारलाई दिई फाेटाे खिचाई जान्छन् । हामीलाई अहिले १ लि. मट्टीतेल , त्रिरपाल , खाना र सफापानी चाहिएका छन् । तर घरपरिवारलाई बाढीमा छाेडि सरकारका ढाेका खट खटाउदैछु । सरकार कुनै प्रतिनिधि भेटन अाएकाे छैन् ।
नेपाली सेनाले उद्वर गरयाे । तर उहाँसँग हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू छैन् । पिडितका नाममा लुटने नेताहरू हामीलाई हालसम्म हेरन् अाएका छैन् । स्थानिय सरकारका जनप्रतिनि एसि चलाई बसेका छन् । हामी खाना र बाँस खाेजदै छाैँ पिडित राज कुमार पासमानले बताउनु भयाे । सिरहा जिल्ला भरी यस्तै बढी पिडित पिडामा छन् । तर विपतका लागि ल्यएका बजेट स्थानिय सरकारमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका खल्तिमा पुगिसकेकाे छ । संघ र प्रदेश सरकार निर्देशन तथा पिडितका ३ तीन चार लाख लिलामीमा व्यस्त छन् । जनता भगवान भराेसे । विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू चन्दामा व्यस्त छन् । सरकार कहाँ छ ? जय हाे गणनतन्त्र सरकार ।